Wararka Maanta: Arbaco, Apr 1 , 2020-Puntland oo cudurka coronavirus kaga hortagaysa Bandow habeenimo oo ay kusoo rogtay degaanadeeda
Bandowga oo bilowday salaadii maqrib kadib, ayaa ah mid lagula dagaalamayo isku socodka dadka iyo gaadiidka, iyadoo dhammaan albaabada loo laabay xarumaha ganacsiga oo idil iyo goobaha lagu caweeyo.
Magaalada Garowe oo caasimadda Puntland ayaa kamid ah magaalooyinka uu sida xooggan uga dhaqan galay bandowgaan, iyada oo boqolaal kamid ah ciiddamada bilayska iyo gaadiidka dagaalka lagusoo daadiyay waddooyinka waaweyn ee magaalada.
Ujeedada laga leeyahay bandowgaan ayaa ah, sidii looga hortagi lahaa cudurka Coronavirus, oo la aamisan yahay inuu aad uga faafo meelaha saxmada badan ee ay dadka badan iskugu yimaadaan. Maadaama aan dadka caafimaadkooda la wada hubin.
Guddiga la dagaalanka iyo wacyi galinta cudurka Coronavirus ama Covid 19, oo caawo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garowe, waxay shacabka fareen inay qaataan awaamiirta lasoo rogay islamarkaana ay guryahooda u hoydaan wixii loo gaaro salaada maqrib kadib.
Puntland weli wax kiis ah oo ku saabsan cudurka Coronavirus ah lama sheegin, balse maamulka ayaa ku jira taxadar aad sareeya, iyadoo haatan Ku dhawaad 20 qof ay ku jiraan xaalad karantiil ah. Afar kamid ah dadkaas waxay kasoo jeedaan Hindia.
Bandowga waxaa la filayaa inuu sii socda illaa bartamaha bisha Abril. Waxaa sidoo kale uu saameyn ku yeelandoonaa dhaqaalaha bulshada xilli haatan la dareemo sicir barar ku yimid maciishadihii dururiga ahaa iyo dollarka oo horey u kacsanaa.